रामचन्द्र पौडेल १२ वर्षपछि हलमा, ‘अनुराग’ हेरेपछि के भने ?
पत्रकार ऋषि धमलाले निर्माण गरेको चलचित्र अनुराग हेर्न कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सिटी सेन्टरस्थित बिग मुभिजमा पुगेका छन् । बुधबार साँझ पौडेलसहित चर्चित नायिका एवम अभिनेता रेखा थापापनि धमलाको अनुराग हेर्न हलमा पुगेकी छिन् ।
नेता पौडेलले भने आफू १२ वर्षपछि हलमा आएर चलचित्र हेरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘ऋषि धमलाले बनाएको फिल्म राम्रो छ । विषयवस्तु राम्रो छ । धमलाजीको कुरा हार्न नसकेर म हलमा आएको हुँ । कलाकारहरुको अभिनय जर्बजस्त छ ।’ चलचित्रले युवा पुस्ताहरुको मन जितेको पनि नेता पौडेलले बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि चलचित्र सफल हुने विश्वास दिलाए । उनले चलचित्र क्षेत्रमा भएको एकाधिकार तोड्न पत्रकार धमलालाई साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘देश र जनताको लागि निरन्तर खट्ने पत्रकार फिल्म क्षेत्रमा आउनुभएको छ, उहाँलाई हल वितरकहरुले किन प्रोत्साहन नगरेको ? किन सहयोग नगरेको ? मलाई यसमा दुःख लागेको छ । सबैले साथ दिनुपर्छ । मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका एकाधिकार तोड्नुपर्छ । धमलाजीले भनेकोजस्तो चलचित्र क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्न मेरो पूर्ण साथ छ ।’
नायिका थापाले पत्रकार ऋषि धमलाले चलचित्र क्षेत्रमा हात हालेर यो क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको बताए । उनले भनिन्, ‘ऋषि धमला यो देशलाई र यो देशको माटोलाई माया गर्ने व्यक्ति हो । म उहाँको योगदानको म उच्च कदर गर्न चाहन्छु ।’
नायिका थापाले चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ अनुहार भएपनि नायिका एलिजा गौतमको प्रस्तुति दमदार रहेको भन्दै उनको अभिनयको खुलेर प्रशंसा गरिन् । उनले भनिन्, ‘म त जहिलेपनि नयाँ आर्टिष्ट ल्याउने मान्छे हो ।
एलिजा नयाँ आर्टिष्ट भएकोले कस्तो अभिनय गरेको होला भनेर मलाई सुरुमा कौतुहलता थियो । त्यही भएर म अनुराग हेर्न आएकी हुँ । उ आगामी दिनमा अझै स्थापित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
‘अनुराग’ धमलाको नयाँ प्रयास भएको सुनाउँदै उनले पहिलो प्रयासमै यसले लोकप्रियता हाँसिल गरेको सुनाईन् । उनले नेपाली चलचित्रलाई हल वितरण गर्ने कुरामा, माया गर्ने कुरामा कतिको माया गरियो भन्ने कुराबारे उल्लेख गर्दै चलचित्र क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने कुरामा ऋषि धमलाले हिम्मत गरेको र त्यसमा आफ्नो पूर्ण साथ रहेको विश्वास दिलाईन् ।
Posted on October 4, 2018 Author Categories मनोरञ्जन, मुख्य समाचार
Previous Previous post: म्यानमारलाई नेपालले ८ विकेटले हरायो
Next Next post: वर्षमा एक अर्बको तेल चुहावट, मूल्य बढाउँदै बेच्दा पनि अढाइ महिनामा निगमलाई एक अर्ब घाटा